महिला ट्वाइलेटमा एक प्रेम जोडीले गरे अनौठो विवाह ! (भिडियो सहित) « Pariwartan Khabar
महिला ट्वाइलेटमा एक प्रेम जोडीले गरे अनौठो विवाह ! (भिडियो सहित)
5 February, 2018 1:02 pm
मानिसहरू विवाहका लागि ठूला सपना देख्नछन् । कोही त महिनौसम्म प्लानिङ गर्छन् । कोही भेन्यू त कोही मेन्यूलाई लिएर निकै प्लानिङ गर्छन् । मानिसहरू पहिले घरमा टेन्ट गाडेर विवाह गर्थे, अहिले पार्टी प्यालेसमा गर्ने चलन छ ।
तर यस्तो कहिले भएको छैन, की कसैले वाथरूमा विवाह गरोस् । तर अहिले एक विवाह वाथरूममा भएको छ, जसको चर्चा सामाजिक संजालमा भइरहेको छ ।
मानमाउथ काउन्टीको प्रहरी कार्यालयले फेसबुकमा यो विवाहको भिडियो पोस्ट गरेको छ । भिडियोमा वाथरूममा विवाह गर्नुको कारण समेत उल्लेख गरिएको छ ।
जब ब्रायन स्कूल्ज र मारिया स्कूल्ज विवाहका लागि अदात पुगे । अदालतमा बसिरहेका बेला ब्रायनलाई उनकी आमाको फोन आयो । उनले आफुलाई सास फेर्न गाह्रो भएको बताइन् । फोन गरेको समयमा उनकी आमा बाथरूमा थिइन् । ब्रायन हताहतार घर पुगे । त्यो बेलासम्म उनकी आमको अनुहार पहेँलो भइसकेको थियो र पसिना आइरहेको थियो । कुरा गर्ने अवस्थामा उनी थिइनन् । उनकी आमाका लागि तुरून्त अक्सिजनको व्यवस्था गरियो र बाथरूममै उपचार थालियो ।
ब्रयान र मारियाको खुसी एक मिनेटमै तहसनहस भयो । दुवैले विवाह नगर्ने निर्णय गरे । प्रहरीका अनुसार फेरी विवाह गर्न ४५ दिन पर्खनुपर्ने अवस्था थियो । आमालाई बाथरूमबाट बाहिर ल्याउने सम्भवाना समेत थिए । त्यही ममयमा मानमाउथ काउन्टीका अफिसरले बाथरूममै विवाह गर्ने सल्लाह दिए । त्यसपछि न्यायधिससँग सल्लाह भयो र बाथरूममै विवाह भयो ।- एजेन्सी